Daawo: Arin mucjiso ah oo soo food saartay qoys ku dhaqan magaalada Burco – idalenews.com
Burco(INO)- Qoyska oo ku dhaqan magaalada Burco ayeey soo food saartay arin dadka oo dhan ka yaabisay kaddib markii cunto kasta oo ay karsadaan isku badallayaan midabo kala gadisan.
Qoyskan ayaa ku dhaqan xaafadda Octobar ee magaalladda Burco, ayeey sheegeen qoyska in biyaha ay shubtaan iyo cuntadda ay karsadaan isku bedelayaan midabo kale, taasoo la soo daristay saddexdii cisho ee la soo dhaafay.
“Waqtigan aan joogno ilaa saddex cisho ayeey arinta soctay, laakiin muddo laba bilood ayaa hooyaday cuntadda aanu siinayno wax loogu darayay oo mar walba waan diidin jirnay, markii dambe waxay gaadhay in cuntii oo dhan nooc kale isku bedelaan, markii aan u adkaysan waynay ee biyihii isbedelen, ee quraacdii iyo qadadii is bedeleen ee aanu cuni kari waynay ayaanu qaylo dhaan u dirsanay culimadda magaaladda si la noogu duceeyey meel la nooga yimidna garan mayno”ayeey sheegtay mid ka mid qoyska dhibaatada soo food saartay.Waxaa kaloo ay intaa raacisay “Marxuumaddii guriga lahayd way dhimatay, bil iyo afar iyo toban habeen aniga, hooyaday iyo ayeeydey ayaa ku noolaa, markii dambana walaashay ayaa usoo guurtay iyaduna way ku aragtay oo cuntaddii ayaa is wada bedelay cunto kasta oo la kariyaa nooc kale ayey noqonaysaa, shaahu wuu isbedelayaa, bariisku wuu isbedelayaa, caanuhu way is bedelayaan, cuntaddii saaka aanu dubanay qof nagama cunin oo guryo kale ayaa la noogu soo kariyey qaarkoodna hoteelada ayey wax ka soo cunayeen”.
“sharaabkii ama biyihii oo kale dhiig bay isku bedelayaan, cuntii oo dhan way is bedelayaan marka waxaanu u aragnaa mucjisoo rabaaniya oo ilaahay keenay” mid ka mid ah culimadii quraanka ku akhriyey guriga.
Ugu danbeyntii, arintan ayaa mucjiso ku noqotay bulshada magaaladda Burco, kuwaas oo boqolaal dadweynaha ahi gurigii soo booqanayaan si ay indhahooga ugu soo arkaan.
Madaxweyne Xassan Sheekh oo warbixin ka dhageystay guddiyo loo saaray xaalada abaarta